Nanatitra sy nametraka ny fitoriany teny amin’ny Fitsarana eny Anosy ny senateran’i Madagasikara, Olivier Rakotovazaha, sy ny mpisolo vava azy, omaly. Nambarany tamin’izany fa mitory ireo solombavambahoaka telo mivondrona ao amin’ny depiote ho an’ny fanovana …Tohiny
Anosizato : Mpitarika sarety maty voahitsaky ny kamio
Rangahy manodidina ny 50 taona eo no maty tsy tra-drano rehefa voadona, ary voahitsaky ny kodiarana kamio teo amin’ny faritry ny lohany. Teny Ambodirano Ambodivona afaka kely ny tetezan’Anosizato no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana ity omaly tokony …Tohiny
Ambalavao : Teratany sinoa hita faty
Lehilahy teratany sinoa manodidina ny 60 taona, tompona “quincaillerie” sy hotely lehibe iray any Ambalavao Fianarantsoa no hita faty tao amin’ny toeram-pivarotany tany an-toerana omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora sy sasany. Araka ny …Tohiny
Fisolokiana amin’ny Mvola : Mpivarotra merikiora iray no lasibatra
Notanana am-ponja vonjimaika ireo roalahy tra-tehaka nisoloky tamin’ny filazana fa mpividy merikiora, rehefa avy nalaina am-bavany teny anivon’ny fampanoavana, omaly. Tamin’ny loharanom-baovao araka izany no nahazoana tatitra mahakasika ny fisian’ity fisolokiana avo lenta ity, izay …Tohiny
Noho ny korontana nateraky ny fisian’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna tany Andapa, Distrikan’Ambanja, tamin’iny herinandro lasa iny, dia nisy ny fisamborana nataon’ny zandary sy ireo tompon’andraikitra any an-toerana. Olona miisa 55 no indray nanaovana fanadihadiana tamin’izany, ...Tohiny